Nyochaa: Ọgbọ nke 4 nke Apple TV bụ Ngwakọta nke Ezi, Ihe Ọjọọ na Njọ
Nyocha ahia Ụlọ ihe nkiri TV
Ọgbọ nke 4 nke Apple TV bụ Ngwakọta nke Ezi, Ihe Ọjọọ na Njọ
by Mba Daniel
Apple TV ọ dị n'eziokwu Ọdịnihu nke Television?
Oge nke anọ ka amara maka Apple TV ? Apple ewerewo ihe omuma nke mobile ma ha na-eme n'ime ụlọ ọrụ ahụ na iPad Pro , mana iji nweta ụlọ obibi ahụ, ha ga-eburu Roku ma gbanye Chromecast na Amazon Amazon Fire Fire.
Ma ebe ọ bụ "Apple" na Apple TV nke na-eme ka anyị chee ma ọ bụ nke a bụ nzọụkwụ ọzọ dị na televishọn, ọ bụkwa "Apple" na Apple TV nke nwere ike ịbụ nnukwu ihe mgbochi ya. Apple nwere ihe ọmụma dị mfe na nke kachasị elu, ọ bụ ezie na nke a na-arụ ọrụ nke ọma na mkpanaka, ọ nwere ike ime ka ọ bụrụ onye nkatọ ka ha na-agbalị maka ahịa ọhụrụ. Uzo di oke nfe nke nwere ike ime ka isi isi ogbugbu di ka ihe ngbado ya bu ezi ihe omuma nke uzo ihe omuma nka puru ime.
Ọdịnihu nke telivishọn? Ikekwe ọ bụghị. Ma ọgbọ nke anọ nke Apple TV bụ ụzọ dị mma, ọ dịkwa mkpa karị, Apple TV nwere ọdịnihu dị mma nke ga-eme ka anyị banye n'ọdịnihu. Maka ugbu a, Apple TV nwere ezigbo, ndị ọjọọ na ndị ọzọ jọgburu onwe karịa Apple na-amarakarị na a ọhụrụ ntọhapụ.
Apple TV dịka ngwa iPad / iPhone : 5 Stars
Apple TV: Ezi
Ime obodo. Obere ohuru ohuru nwere ike ghara izu oke, na n'eziokwu, o nwere ihe ndaputa di egwu, ma ebe ozo maka mbipute Apple TV gara aga bu egwu. Ala ọhụrụ ahụ na-anọchi bọtịnụ dị elu-aka nri-aka ekpe na bọtịnụ ukwu na-arụ ọrụ dị ka touchpad. Nke a na-enye gị ohere iji otu ntụgharị swiping ahụ ị na-eji na ekwentị gị iji mee nchọgharị na TV Apple. Ihe njedebe bụ ahụmịhe nke dị mfe iji mee ihe karịa ebe dịpụrụ adịpụ, ọ bụ ezie na m hụrụ na m na-ejikpọ akapadpad kama ịpị, ihe ngosi nke na-arụ ọrụ na MacBook ma maka ụfọdụ nzuzu kpatara anaghị edebanye aha dị ka pịa Apple TV.
Egwuregwu. OK, Ee, anyị niile maara banyere Netflix na Hulu Plus na YouTube na ọrụ niile ị ga-eji na-asọgharị na ị ga-enweta nke ọ bụla n'ime igbe ndị a. Ma ihe nwere ike ime ka Apple TV dị iche na nke mkpọ bụ egwuregwu. Apple TV abụghị akpa mmiri na-egwu egwu. N'ezie, ha bụ n'ezie oge chiri anya na nnọkọ ahụ na nke a. Ma na nke a, Apple na-eme ka ọ bụrụ onye ọbịa na-echere ka ị malite.
Apple TV abụghị naanị otu akụkụ nke ngwaike dị ala nke nwere ike ịmepụta sistema Candy Crush Saga. Apple TV na-eji otu A8 processor na-agba ọsọ iPhone 6 na iPhone 6 Plus. Ọ na-agụnye 2 GB nke RAM maka nchekwa ngwa ngwa. Nke a pụtara na ọ nwere ike ịgba ọsọ ọ bụla ngwa ma ọ bụ egwuregwu nwere ike ịgba ọsọ na smartphone gị, na ike nke smartphones kacha mma.
Apple TV agaghị aga asọmpi na PlayStation 4 ma ọ bụ Xbox ONE, ma ọ nwere nnukwu uru maka asọmpi ahụ. Egwuregwu ndị dị na Apple TV na-ekwukarị na ọ ga-efu n'etiti $ 1 na $ 5 karịa $ 30- $ 60 ebubo maka egwuregwu nkịtị na nnukwu mgbakọ. Na ime obodo na-aghọ onye na-arụ ọrụ Wii dị ka Wii, Apple TV nwere ike iwepụ dị ka ihe egwuregwu egwuregwu.
Siri. Siri nke gụnyere Apple TV bụ ntinye aka maka ọrụ ndị na-ada na akara na ngwaọrụ iyi, na ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịjụ TV gị iji chetara gị ime ihe, ọrụ Siri na Apple TV bụ ezigbo mma - mgbe ọ na-arụ ọrụ. (More on that later!) Siri na Apple TV nwere ọtụtụ ojiji, gụnyere ịchọ ihe ị ga-ele na ịchịkwa ụda mgbe ịchọta ihe ị ga-ele. Ị nwere ike ịgwa ya ka ị gafere ma ọ bụ laghachi azụ maka oge ụfọdụ, ọ bụrụ na ị pụghị ịghọta ihe a na-ekwu, "gịnị ka o kwuru?" arịrịọ ga-agbapụ azụ elekere iri ma mee ka ihe ntinye akara na-emechi. 17 Uzo Ozo Nwere Ike Inyere gi aka Ikwu
Otu ihe m chere na ọ dị mma bụ ike ịjụ Siri onye nọ na ihe omume m na-ekiri. Apple TV mepụtara IMDB -type interface na-ekwe ka m na-agagharị site na ndị na-eme ihe nkiri na pịa site iji hụ ha filmography. Akụkụ dị ukwuu banyere nke a bụ na iji bọtịnụ menu iji kwado ndabere na-eme ka m laghachi azụ na vidiyo m na-ekiri na kpọmkwem ebe m hapụrụ, n'ihi ya anaghị m apụ na ahụmahụ ahụ iji nwetakwuo ihe ọmụma. Nke a na ike ịgbanwe ngwa ngwa n'etiti ngwa ngwa ma maliteghachi ebe anyị kwụsịrị nwere ike ịbụ abụọ kachasị mma n'ọdịnihu nke telivishọn.
Ụlọ Ahịa . Enwere m egwuregwu, mana ka echefula na enwere ụlọ ahịa ngwa ngwa maka Apple TV. Na ntọhapụ, enwere ihe karịrị 1,000 ngwa na ụlọ ahịa ngwa ngwa Apple TV. Site na njikwa, Amazon's Fire TV anọwo na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ na ọkara yana 1600 "ọwa" na Roku 3 anọwo ihe karịrị afọ abụọ ma nwee puku ngwa abụọ. O siri ike ichetụ n'echiche TV Apple nke na-eme ka nhọrọ Roku mara n'ime ọnwa ole na ole.
Ngwa. Enweghị m ohere ibudata otu ngwa ọ bụla, ma karịsịa, ana m etinye uche n'ihe ndị dị ka HBO Ugbu a na Hulu Plus. Ma ihe m hụrụ bụ ụfọdụ ezi, siri ike ngwa na-agba ọsọ na n'elu ọnụego ngwaike. Nke a mere ka m nwee ahụmahụ na-enweghị ntụpọ ebe m nwere ike ịgbanye ngwa ngwa na nnukwu ihe nchekwa data HBO iji chọpụta ihe m ga-achọ ile anya, ahụmahụ nke na-ewute mgbe ụfọdụ na ngwaọrụ ndị ọzọ - tinyere mbipụta mbụ nke Apple TV!
Ọrụ Nchọgharị . Otu igodo ọzọ nke Apple TV bụ ikike nke ngwa iji banye n'ime njirimara ụwa. Ugbu a, nke ahụ pụtara na ị nwere ike ịrịọ Siri ka "kpọọ [ihe nkiri] na Netflix" wee kwụsị usoro ịmepe Netflix ngwa na ịchọ vidiyo ahụ. Apple TV na-amakwa ịbanye n'ime Netflix na-enweghị ntụziaka ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị ngwa gụgharia na-enye ya nkiri ma ọ bụ vidiyo. Dị ka ngwa ndị ọzọ na-akwado ọrụ a, ịchọta ihe ị ga-ele ma na-ele ya anya ga-abụ ọtụtụ ahụmahụ na-adịghị ahụkebe karịa usoro nke ugbu a iji mepee ọhụụ onye ọ bụla na-achọ ihe ngosi.
Apple TV: Bad
N'ụzọ dị mwute, ọtụtụ ihe ọjọọ na-aga na nke ọma. Ka echefu chin na ebe a. N'ọtụtụ ụzọ, Apple TV bụ ntọala 1.0, n'ihi ya, a ga-agbaghara ụfọdụ nkịta. Ma enwekwara ụfọdụ ihe mgbagwoju anya, dịka nkwado maka ịkọrọ vidiyo foto iCloud mana enweghị nkwado maka iCloud Photo Library . Ọ bụghị ebe nile nke iCloud Photo Library iji lee foto na ngwaọrụ m niile?
Ọ dịghị Amazon ngwa ngwa Video . Nke a abụghị Apple kpatara ya. N'ezie, mmejọ ahụ bụ ụgha na Amazon, onye amachibido ire nke Apple TV na Amazon.com n'ihi na ọ dịghị akwado Amazon ozugbo Video ọ bụ ezie na naanị ihe mere Apple TV adịghị akwado Amazon ozugbo Video bụ n'ihi na Amazon ama ' t tinye ngwa ahụ. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ na-ese site na Apple TV. Ọfọn, AirPlay na-arụ ọrụ nke ọma na Amazon ngwa ngwa Video , ya mere na ị ka nwere ike ịlele Amazon Prime fim gị na TV telivishọn site na Apple TV, Amazon mere ka usoro a bit ọzọ na-egbu mgbu. (Ekele, Amazon!)
A na-eji egwu egwu egwu . Apple TV abụghị naanị maka vidio vidio na egwu egwuregwu. Ọ na-emekwa ka ezigbo redio. Ma ọ bụ ọ ga-abụ ma ọ bụrụ na ngwa egwu ahụ adịghị ntakịrị mkparị. Ngwa ahụ na-akwado Music Apple , tinyere ọdụ redio gụgharịrị. Ma, ọ bụghị ezigbo ọrụ ịkwado egwu gị. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike igwu otu listi ọkpụkpọ gị, ma ịnweghị ike igbanye listi egwu ahụ. Ma ọ bụrụ na ị jụọ Apple TV iji kpọọ gị abụ site na Siri ihe niile ị ga-enweta na nloghachi bụ ozi nkwụsị banyere otu TV Apple TV na-apụghị ime.
Siri. N'ikwu okwu banyere Siri, ebe o nwere ike imesị bụrụ ezigbo onye na-agbanwe egwuregwu n'ọdịnihu, ọ bụ obere nkwụsị ugbu a. Akpa, ọ bụghị otu Siri dị na iPad gị. Ọ bụghị naanị na o nweghị ọtụtụ atụmatụ, ọ na-arụ ọrụ dara ogbenye n'ịghọta okwu gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ na-esiri m ike ịghọta ihe m rịọrọ ka m "gbanwee 10 sekọnd", mgbe ụfọdụ m na-eche na m kwuru "nke mbụ" na mgbe ụfọdụ, echere m na "amaokwu 10 sekọnd". My iPad enweghị nsogbu ịnụrụ m ịghọta.
Ma ngwa ngwa nile adighi akwado ike nke Siri. N'ezie, Apple TV adịghị ka ọ na-arụ ezigbo ọrụ nke na-akwado Siri n'ozuzu ya. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịchọ Apple TV site na ngwa nchọta ahụ, mana rịọ Siri ka ọ "Chọọnụ Asphalt 6" ma ị ga-ahụ ngwa ngwa na ọ dị mma na ịchọta vidiyo.
Apple TV: Ugly
Onscreen keyboard. Ihe ndị siri ike Siri na-ejikọta ya na njirimara na-egbuke egbuke. Na ihe nwere ike ịbụ mkpebi kachasị dị ka Apple, dị ka Apple TV na-edozi mkpụrụedemede nke mkpụrụedemede gafee ihuenyo na akara karịa akara nke ọtụtụ ntanetị ọrụ na-enweghị ike igodo ma ọ bụ aka. Nke a na-eduga n'ọtụtụ ọrụ ntinye okwuntughe na edemede okwu. Ọ ga-esiri gị ike ma ọ bụrụ na Siri nwere ike ịzọpụta, ma na nhọrọ ọzọ na-adịghị mma, ịnweghị ike iji Siri maka ụda olu. Ya mere, mgbe ị banyere ngwa nchọta ahụ, ị ​​ga-ejide na keyboard ahụ jọgburu onwe ya. Ọ ga-adị mfe karịa ịjụ nyocha gị na Siri.
Na mgbe ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ ọrụ ga-achọpụta na - ọtụtụ n'ime oge - aha njirimara m bụ adreesị ozi-e - na - ezuru oke! - ọ bụkarị otu adreesị email ahụ. Kama ịbanye ugboro ugboro na adreesị ozi-e na njirimara na-adịghị mma na ihuenyo, gịnị mere Apple TV agaghị enye m nhọrọ nke akpaaka mejupụtara arịrịọ a site na adreesị ozi-e m na-eji banye na ọrụ Apple ma ọ bụ, mma, zọpụta ndepụta nke aha njirimara / adreesị ozi-e iji jiri ihe ndị a.
Ụlọ Ahịa . Enwere ike ịchekwa Ngwaahịa ahụ dị mma ma jọọ njọ? Ee. Ịdị adịahịa nke Ụlọ Ahịa dị oke mma. N'ụzọ dị mwute, mmejuputa iwu ugbu a abughi oke. Apple emeela nnukwu ọrụ nke ịgwa gị ụdị ngwa ị kwesịrị ibudata ngwa ngwa, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga achọ ụfọdụ ihe bara uru a ma ama na listi 1,000 dị, ị ga-ahụ onwe gị ma ọ bụrụ na Apple dara n'ụra. e gosipụtara ndepụta ngwa ngwa na Ụlọ Akwụkwọ Ụlọ Ihe Ụlọ Ahịa. Enweghi edemede pụtara na ị ga-agbada ala "ndepụta ndị dị oke n'elu" iji hụ ihe niile dị.
Apple TV: Iwu ahụ
Ya mere, olee otu ngwaọrụ nke nwere ọtụtụ ihe ọjọọ na nke jọrọ njọ na-atụle ezigbo 4 kpakpando? N'ihe ka ukwuu, ọ bụ ikike nke ngwaọrụ karịa 1.0 version. Na otú Apple TV si arụ ọrụ na ngwaọrụ iOS ndị ọzọ dịka iPad na iPhone. Ndien, ke akpatre, enweghị oké asọmpi.
VISI VHT215 Ụlọ ihe nkiri Ụlọ ihe nkiri
Sony BDP-S7200 Network Blu-ray Disc Player: Profaịlụ Product
Roku Na-amụba Ịntanetị Gụgharia Ịntanetị 5 Ụdị
Yamaha mara ọkwa RX-V "79" Ụlọ ihe nkiri Ụlọ ihe nkiri
Vivitek Qumi Q2 HD ihe ntanetị ngwaọrụ - Nyocha
VUDU 3D Gụgharia Gụgharia - Ihe Ị Kwesịrị Ịma
Jawbone kwupụtara UP4 Mma Nkịtị na Ntanye Na-enweghị Ntụle
Ngwaọrụ iji tinye otu Forum gaa na Blog gị
Gateway - Profaịlụ Nkwado Nka
Kedu ka ị si arụ ọrụ ntanetị n'ịntanetị na nyocha gị?
Otu esi eziga ozi na ndepụta nkesa na Outlook
Ndị Ethernet Network Switches maka Netwọk Ụlọ
IPod Touch maka ndị isi na ndị na-adịghị ahụ anya
Kedu FTP na kedu ka m ga esi eji ya?
Otu esi emepụta ngwa maka iPhone
Otu esi achọta Adreesị IP nke Belkin Router
Google Buzz bụ Nwụrụ Anwụ
Kedu ihe bụ Geofencing?
Mụta maka CSS3 Opacity
Otu esi egbochi mmemme site na izu ohi na Windows
Kedu ihe bụ Ụdị Ụdị Nhazi
Otu esi achọta Obituaries Online
Otu esi eji Control Center na iPhone na iPod aka
Uzo esi agaghari na egwu Windows Media Player 12
Otu esi echebe kọmputa gị site na ọkụ
Kedu ihe bụ SGN File?